Zimbabwe · September, 2010 · Global Voices
Zimbabwe · September, 2010
Stories about Zimbabwe from September, 2010
Politics 22 September 2010
“Groups in Bulawayo marked International Peace Day on Tuesday (yesterday) with a peaceful march starting at the Bulawayo City Hall. The march went ahead peacefully after police clearance was granted,” Sokwanele reports.
Human Rights 22 September 2010
Action Alert from Zimbabwe for Jenni Williams: “News update from WOZA – 1.30pm – Wednesday 22nd – 83 members released on free bail – Jenni Williams arrested outside Harare Magistrate’s Court.”
Politics 11 September 2010
Zimbabwe: Mugabe Must Go Now
After 30 years in power, now it is time for Zimbabwe's President Robert Mugabe to go: “The Union for Sustainable Democracy suggests that even if Robert Mugabe is in good health, its about time he stepped down.”
Zimbabwe: What makes a Zimbabwean hero?
What makes a hero in Zimbabwe?: “In Zimbabwe, it would seem that the definition of heroism is controlled by Zanu PF alone. Hero designation has always been in the hands of the ZANU-PF Politburo, though non-Zanu PF parties have recently demanded that the designation process be made more inclusive to...
South Africa 4 September 2010
Zimbabwe: Art Threatens Mugabe
Arts & Culture 3 September 2010
Art threatens Zimbabwean President Robert Mugabe: “The artist, Owen Maseko, is currently challenging Mugabe’s ban on his exhibition depicting Gukurahundi, the 1980s Matabeleland massacres.”